Ntọala kachasị mma maka akpụkpọ anụ mmanu - Mma
Ahụike #actagainstabuse Atụmatụ & Ndụmọdụ Rentzụ Ụmụ Ibu Ibu Teknụzụ Nke Nrụgide Agba Style International Ndị Ọzọ
Ntọala kachasị mma maka akpụkpọ anụ mmanu, site na ụlọ ahịa ọgwụ na okomoko
Zụta ntọala mgbe ị nwere mmanu mmanu nwere ike ịbụ ihe aghụghọ. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnwe ike ịme ka ọ bụrụ ihe ndabara na usoro kachasị matte ị nwere ike ịchọta, enwere isi ihe ndị ọzọ ị ga-ebu n'uche - dị ka udidi nke akpụkpọ ahụ gị, ọkwa mkpuchi ị na-achọ na njedebe ị masịrị gị.
Oke matte na etemeete gị nwere ike ile anya dị ka akọrọ ma keeki ma dozie usoro dị mma na pores. I matt ezu na ị ga-ejedebe na mmanu mmanu mmanu gbachapụ ihu gị n'ihu ehihie. Mgbe anyị nwesịrị ọtụtụ ikpe na njehie kemgbe ọtụtụ afọ, anyị belatala ntọala kachasị mma maka akpụkpọ anụ.
Na ezi mma, anyị nwere mmadụ abụọ na-ese ihe osise-Sarah Lucero, onye isi ụlọ ọrụ ụwa, ihe okike maka ihe Stila Ngosiputa Ngwa , na Kelli Bartlett, onye omenkà etemeete ama na onye ntụzi ọrụ nka nke Glamsquad - Jiri ụfọdụ ndụmọdụ ndụmọdụ, tinyere ụfọdụ ngwaahịa ọkacha mmasị ha maka ọgụ ọkụ.
Njikọ: 6 Atụmatụ Womenmụ nwanyị nwere akpụkpọ anụ mmanu kwesịrị ịma
1. Maybelline Fit Me Matte + Poreless Liquid Foundation: Druglọ ahịa ọgwụ kacha mma
Na asatọ ego karama na na 38 shades, nke a bụ n'ezie ezigbo ebe na-amalite ma ọ bụrụ na ị na-ejighị n'aka nke ntọala ị chọrọ ịzụ. (Ọ bụkwa ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị nọ n'etiti etiti ma chọọ ụcha mgbanwe iji tide gị ruo mgbe, sịnụ, oge ọkọchị gị ga-alaghachi.) Site na micro-powders ya na-agba agba nke na-eme ka ọdịdị nke ọ bụla bilie, ọbara ọbara ma ọ bụ enweghị aha. otu onye nchịkọta akụkọ kọwara mmiri mmiri a dị ka 'nke kasị agbaghara mmehie — ma n'eme ya ma n'isi ya.' Naanị ihe ngosi bụ na mkpuchi ahụ dị nfe na nke kachasị mma ọ bụrụ na ịchọrọ mkpuchi ọzọ, anyị ga-akwado iji nke a jiri obere ihe mkpuchi. Ndụmọdụ: Ghichaa akpụkpọ gị tupu ị na-etinye ntọala ọ bụla. Wayzọ a ị na-amalite site na-eji ire ụtọ, dị ọcha isi (na-enweta ọbụna ogologo eyi oge n'ihi).
Zụta ya ($ 8)
kacha mma na fim na-ekiri na ezinụlọ
2. Laura Mercier Oil-Free Tinted Moisturizer: Nke kacha mma maka mkpuchi ọkụ
Otu kpochapụwo maka otu ihe kpatara ya, usoro a na-enweghị mmanụ na-adị ka ude dị fechaa na-aga. (Were ya n'aka anyị: Nke a na - agwakọta dị ka nrọ ma bụrụ nke na - enweghị isi — ọbụlagodi maka ihe eji achọ mma.) Agbanyeghị na mkpuchi ya dị oke mma ịmalite, ọ nwere ike wulite ya ngwa ngwa iji kpuchie ịcha ọbara ọbara ma ọ bụ ntụpọ na-enweghị ịpụpụ ihu gị ma ọ bụ idozi n'ime mkpuchitaghi patches ofụri usen. Ndụmọdụ: Djá a translucent ịtọ ntụ ntụ n'elu ọkpọiso, imi na agba ka ị wee debe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na mpaghara ahọpụtara ebe ịchọrọ - dị ka agba gị.
Zụta ya ($ 46)
Causemetics na-eme nke ọma
3. Eme nke ọma Causemetics Buildable blur CC Ude: Best maka Ọkara mkpuchi
MVP na-eguzosi ike n'ihe na-eme ka etemeete anyị, nke a cc ude (nke ahụ na-agbazi agba agba, btw) na-etinye ihe mkpuchi dị ịtụnanya na-enweghị mmetụta dị oke n'ahụ gị. N'iji pigmenti na flaxseed wepụ na usoro ahụ, ọ na-agbasa usoro dị mma ma na-ebuwanye ibu, ebe ị na-ewe mmanụ dị ukwuu n'ihu gị. Anyị na-eyi ya site na mugg n'oge okpomọkụ ụbọchị anyị na complexions anọgidewo nnọọ na-enweghị nsogbu. Ndụmọdụ: Kwadebe akpụkpọ ahụ gị na gel ma ọ bụ mmiri na-eji mmiri eme ihe, nke ga-enyere gị aka ịmịcha anụ ahụ n’etinyeghị ya mmanu mmanu ma sorokwa ya jiri ihe eji eme ka ọ dị mma ma ọ bụ na-enweghị mmanụ, nke ga - enyere aka mee ka akpụkpọ ahụ dị nro ma debe etemeete ka ọ ghara ịtọ. n'ime pores gị, ka Bartlett na-ekwu. (Anyị hụrụ n'anya) Ude mmiri Tatcha na Lancôme’s La Base Pro .)
Zụta ya ($ 38)
4. Stila Nọrọ na All Day Foundation + Concealer: Best maka Full mkpuchi
Achọrọ m iji ntọala nke enweghị mmanụ, mana ọ nwere ihe nracha ude. Duo a (nke gunyere ntoala ya na ihe nzo nke ozo di n’elu) choro ma igbe. M na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa nwere mmanu mmanu ma swearụọ iyi site na ngwongwo a n'ihi na ọ na-enyefe mkpuchi zuru oke n'emeghị ka ị nwere oke etemeete. Na mgbakwunye, ọ na-efegharị nwayọ ma nọọ ogologo ụbọchị dum na-enweghị njem, ka Lucero na-ekwu. Ndụmọdụ: Jiri sponge etinyere mmiri mmiri ma ọ bụ ude mmanụ — ọ bụghị mkpịsị aka gị. Nke a ga - agba mbọ hụ na ị ga - ejedebe n’elu ntọala karịrị akarị na - anọdụ ala n’elu akpụkpọ gị, nke ga - eme ka ọ ga - ekwe omume ịmịpụ ma ọ bụ nyefee ya.
Zụta ya ($ 40)
5. BareMinerals Mmeri Nnapụta Skin-Ikpocha Loose Powder Foundation: Kachasị ntụ ntụ
Maka gals griiz ndị nwekwara ike ịgbaji, ntụ ntụ a bụ n'ezie ihe dị mma. Na ngwakọta nke anụ-guzozie Efrata dị ka zinc, sọlfọ na kaolin ụrọ, ọ soaks elu ọ bụla ngafe mmanụ si n'elu, ebe salicylic acid na-aga miri iji nyere aka ikpochapụ pores. Otu onye editọ kwuru, sị, 'Ana m eji ya eji ahịhịa etemeete na-adịkarị nro maka mkpuchi dị nro, nke na-adịkarị ka eke ga-adị na ihu m.' Ndụmọdụ: Maka etiti ehihie, ana m akwado ịkwanye ihe Mma Blotterazzi n'elu akpụkpọ gị, nke na-arụ ọrụ dị ka ntụpọ ma ọ bụ akwụkwọ na-ehichapụ ma ọ ka mma n'ihi na ọ naghị akpaghasị ntọala gị, na-adụ Lucero ọdụ.
Zụrụ ya ($ 29)
6. Hourglass Ngosiputa Ngwa Immaculate Liquid Powder Foundation: Kachasị Okomoko
N'eziokwu, ọnụahịa ọnụahịa bụ tad steep maka ntọala, mana usoro a na-eji ogologo oge eme ihe bara uru ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwụsị ọkụ. (Anyị na-echekwa nwoke a maka oge pụrụ iche, nke na-enyere ya aka ịdị ogologo oge.) Usoro mmiri mmiri na-eme ka ntụ na-asọba na akpụkpọ anụ na-adịghị na ya ma na-agbada na ngwa ngwa ka ị wee nwee ezigbo. Clayrọ Kaolinite na-eme ka mmanụ ghara ịgwụ ogologo ụbọchị dum.
N'ụzọ dị oke egwu, anyị eyiri nke a site na ụdị ihu igwe na ọnọdụ niile (gụnyere ụbọchị ịse awa 12, ebe anyị nwere ọkụ ọkụ na-akụda ihu anyị). Ndụmọdụ Ndụ: A hydrating ọnọdụ ịgba bụ ezigbo enyi gị n'ihi na ọ ga - enye aka igbachi etemeete gị n'emezighị akpọnwụ gị, nke nwere ike ime ka ihu gị wepụta mmanụ karịa, ka Bartlett na - ekwu.
Zụta ya ($ 56)
Njikọ: Anyị Na-ajụ A Derm: Gịnị Efrata I Kwesịrị Izere Ọ bụrụ na I nwere Mmanụ Mkpa Ahụ?
Categories Ngwọta Homelọ Diy Ga-Ahụ
mma Atụmatụ maka arụrụ n'ụlọ
arụrụ n'ụlọ mara mma maka ngwaahịa na-enwu gbaa
esi gwọọ ntutu isi
esi ewepu ntutu ihu na ulo
jean isi awọ sophie Turner
ọgwụgwọ ụlọ maka ọrịa fungal